Nxibelelana nabaXhasi beFunda kunye neFektri | China Qhagamshelana neFunda nabaFundi
SLE5542 qhagamshelana nomfundi wekhadi le-IC kunye nombhali
1.SLE5542 qhagamshelana nomfundi wekhadi le-IC kunye nombhali 2.Isatifikethi: I-SGS, i-EN71 3.Lead time: 3days Dimensions 70.0mm (L) x 70.mm (W) x 10.0mm (H) Isinxibelelanisi se-USB 2.0 isantya esipheleleyo soNikezelo lweVoltage elawulwayo 5V DC Ubuninzi bangoku. 50mA Ubushushu obuSebenzayo 0-50 ° C Ubuninzi obuSebenzayo 4 MHz MBTF iiyure ezingama-500,000 zeKhadi leSmart Interface Inkxaso ye-ISO-7816 Class A, B kunye noC (5V, 3V, 1.8V) Ukuthotyelwa / iziQinisekiso EN 60950 / IEC 60950, EMV 2000 kwinqanaba 1, PC / SC, CCI ...
SLE5528 qhagamshelana nomfundi wekhadi le-IC kunye nombhali
1.SLE5528 uqhakamshelane nomfundi wekhadi le-IC kunye nombhali 2.Isiqinisekiso: I-SGS, i-EN71 3. Ixesha lokukhokela: ii-3days zixhasa amakhadi e-ISO-7816 Class A, B kunye no-C (5V, 3V, 1.8V) Afunda aze abhale ukusebenza kuwo onke amakhadi e-microprocessor ane-T = 0, T = 1 protocols Ixhasa uninzi lweememori khadi ezaziwayo kwintengiso: Amakhadi alandela inkqubo yeebhasi ye-I2C (amakhadi ememori asimahla) anjenge: Atmel: AT24C01 / 02/04/08/16/32/64/128 / / 256/512/1024 SGS-Thomson: ST14C02C, ST14C04C Gemplus: GFM1K, GFM2K, GFM4K, GFM8 ...
I-ACR3201 MobileMate Card Reader, isizukulwana sesibini se-ACR32 MobileMate Card Reader, sisixhobo esifanelekileyo onokusisebenzisa kunye nesixhobo sakho esiphathwayo. Ukudibanisa itekhnoloji yamakhadi amabini kwenye, inika umsebenzisi wayo ithuba lokusebenzisa amakhadi emigca yemagnethi kunye namakhadi smart ngaphandle kwendleko ezongezelelweyo.
ACR3901U-S1 ACS Khusela iBluetooth yoQhakamshelwano neKhadi lokuFunda
I-ACR3901U-S1 ACS ekhuselekileyo yeBluetooth® Qhagamshela iKhadi lokuFunda lidibanisa itekhnoloji yamva nje kwihlabathi labafundi bekhadi elilumkileyo kunye nonxibelelwano lweBluetooth®. Lo mfundi wekhadi kunye nekhadi elingenazingcingo lomfundi uzisa itekhnoloji ephucukileyo kunye noyilo olutsha ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo kwizicelo ezahlukeneyo ezisekwe kwikhadi elisebenzisa izixhobo zeBluetooth ezinje ngeefowuni kunye neepilisi.
I-ACR39U-UF Smart Card Reader yenye yeemveliso zamva nje ze-ACS ezijongana nokuvela kwemigangatho ye-USB. Isifundi esilingana nesundu sibonisa isinxibelelanisi sohlobo C lwe-USB. Isinxibelelanisi sohlobo C se-USB sibonisa ukuhlenga-hlengiswa kweplagi kunye nolwalathiso lwentambo ukuze ulingane neselfowuni kuyilo lweemveliso zesicelo sekhadi elizayo.
I-ACR39 PocketMate II enesidibanisi sohlobo C lwe-USB imele iparadigm entsha ye-ACS. Inika ixabiso kunye nokusebenza okuthembekileyo ukufezekisa iimfuno zakho zokhuseleko.
I-ACR39 Pocketmate II ene-Micro-USB Isinxibelelanisi esiguqula sibe ngumfundi wekhadi elilumkileyo kumakhadi oqhagamshelo anobungakanani ogcweleyo ngokuhamba nje okujikelezayo. Isifundi sekhadi elilumkileyo, akukho likhulu kunentonga ye-USB, iyakwazi ukuxhasa ukufuna usetyenziso lwekhadi elilumkileyo Inika ixabiso kunye nokusebenza okuthembekileyo ukufezekisa iimfuno zakho zokhuseleko.
I-ACR39U PocketMate II ngumfundi ophathwayo wekhadi elibukhali elingaphezu kwamehlo. Uyilo lwe-swivel-usb-go luyigcina ikhuselekile xa ingasetyenziswa. Umfundi uyakwazi ukuxhasa izicelo zekhadi elilumkileyo usebenzisa amakhadi oqhagamshelo apheleleyo. Akukho nkulu kunentonga ye-USB, kubandakanya ukusebenza okuthembekileyo kunye noyilo oluhle.
I-ACR39U Smart Card Reader isebenzisa ubuchwepheshe obutsha kunye bale mihla kwihlabathi labafundi beekhadi ezikrelekrele. Lo mfundi wekhadi elilumkileyo odibeneyo uzisa itekhnoloji ephucukileyo kunye noyilo lwangoku ukuhlangabezana neemfuno ezingqongqo zezicelo ezisekwe kumakhadi.